फावडा मिक्सर भविष्य पुस्ताका लागि पानी राख्ने
को XXI सताब्दी मा, मानिसजातिको झन् ताजा पानी अभाव को समस्या देखिएको छ। स्पष्ट तपाईं आर्थिक गर्न जान भने, यसको खपत, पृथ्वी बिस्तारै उहाँले हुन प्रयोग कहाँ मंगल, गर्न उत्तेजित गर्दछ, thrifty कि रोवर्स डेटा अनुसार नदी बग्ने तथ्यलाई हुन्छ ताजा पानी।
कि यो भयो कहिल्यै, नलसाजी आर्थिक हुन सिक्न: तातो पानी को न्यूनतम आवश्यक प्रयोग गर्न कम गर्न, बहुमूल्य पानी बर्बाद खर्च छैन, यो पिउने पानी, जहाँ सम्भव, प्राविधिक प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
एक पानी बचत उपाय प्रयोगकर्ता सान्त्वना त्यागी बिना खपत को स्तर कम छ। को फावडा मिक्सर - यो उपाय विनिर्माण लागि डिजाइन र सस्ती उपकरण साधारण सुनिश्चित गर्दछ।
सामान्यतया, तपाईं ट्याप पानी खोल्न जब यो देखि narrowcasting एक मोटी स्ट्रिम खन्याइदिएकी। यो क्षण मा यो प्रति लगभग 15 लिटर खपत भएको छ। र विभिन्न कार्यहरू बीच अंतराल यो धार, यो दाँत, लुगा धुने, लुगा धुने भाँडा वा फल सफाई छ कि छैन, बस तल नाली, कुनै पनि उपयोगी काम उत्पादन बिना जानुहोस्।
अनिवार्य रहेको फावडा मिक्सर पानी स्प्रे, यसरी हावा खींच र पानी संग मिश्रण, सानो प्रवाहको एक अधिकता मा स्ट्रिम विभाजन। जेट यसको क्षेत्र बढ्छ, bulkier बन्नेछ। तर एउटै पानी दबाव मा यो पहिले नै प्रति मिनेट बारेमा6लिटर खर्च भएको छ। 60% को छुट्टी पानी बचत हरेक दिन! र खपत को ठाउँमा यो ओसारपसार गर्न प्रयोग ऊर्जा गणना छैन।
Mixers लागि Aerators, एक क्रेन मा स्थापना सुविधा सहित अलग बेचिएको गर्न सकिँदैन वा समावेश उपकरण र फावडा को स्थापना को लागि जडान संग सुसज्जित छैन।
यस शवर स्थापित एक क्रेन, अन्य फावडा कुनै अत्युक्ति ठाउँ मूल छ। किरा सोभियत अन्तरिक्ष स्टेशन "Salut-6" अन्तरिक्ष यात्री को लागि sverhekonomny स्वच्छता शवर, हावा बुलबुले संग मिश्रित दबाव पानी मा बूथ बहुमूल्य ठाउँ मा खुवाइन्छ आविष्कार। न्यूनतम मा पानी प्रवाह अन्तरिक्ष यात्री साँच्चै स्वर्गीय आनन्द प्राप्त!
गुरुत्वाकर्षण को उपस्थिति पूर्णता sensations कायम राख्ने गर्दा निकै पानी खपत कम, त्यसैगरि काम बावजुद धरती फावडा मा, शवर मा ट्याप गर्नुहोस्। सबैभन्दा उन्नत Aerators प्रति मिनेट मात्र 8.5 लिटर को दर मा गर्छन। 12 लिटर गर्न प्रवाह दर वृद्धि एक ट्रपिकल आंसुहरु को मिटाना मा एक साधारण शवर गर्दछ। तपाईं आधा र खपत वृद्धि मा जाने गर्न सक्नुहुन्छ झरना अन्तर्गत सही बारी! र यो extravaganza सबै एक सरल र किफायती उपकरण प्रदान गर्दछ।
दुर्भाग्यवश, हाम्रो अत्यन्तै थकित-बाहिर पानी आपूर्ति प्रणाली मा पानी को शुद्धता खराब छ। यो फावडा मिक्सर को कारण अन्ततः भरा पट्टिका accumulates, र यो समय समयमा सफा गर्न आवश्यक छ। यो सामान्यतया descaling एजेन्ट प्रयोग गरिन्छ। तर तपाईं रसायन गर्न Resort सक्दैन: फिल्टर हटाउन र एक साधारण घरेलू सिरका मा एकै रातमा कम आफ्नो पिंजरे देखि नल फावडा हटाउन। बिहान, फिल्टर, लुगा धुने, तपाईं यसलाई ठाउँमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको आवास Aerators मा क्रेन को स्थापना, तपाईं धरती मा सबै जीवित कुराहरू जीवन दिनुभयो जो ब्रह्माण्ड मा अद्वितीय प्राकृतिक घटना को जगेर्ना गर्न योगदान गर्नेछ।
घरमा ज्याकेट तल धुन
कृत्रिम फर कसरी भेद प्राकृतिक: फर छनौट लागि केही सुझावहरु
झोला Eleganza: इटालियन गुणस्तर र अद्वितीय आधुनिक शैली को उमेर पुरानो परम्परा
हेर्छ मर्मत: घण्टामा Windows को प्रतिस्थापन
चिल्लो निपल: प्रकार, आवेदन, अपरेटिङ सिद्धान्तहरू
Vari पैनकेक पैन: समीक्षा
को मीटर "TC सर्किट" - समीक्षा। को मीटर "TC सर्किट": बयान
बजार अनुसन्धान। अध्ययन वस्तु बजार
को प्रभाववाद र पोस्ट-प्रभाववाद मा चित्रकारी: प्रतिनिधिहरु
Chlamydia। उपचार। लागूपदार्थ।
प्लान्ट Dubrovnik: औषधीय गुण, आवेदन र व्यञ्जनहरु
लचिलो cornices। स्थापना गाइड cornice
एक रोचक जीवनी Anzheliki Agurbash र प्रसिद्धि उनको सडक
नुस्खा: "तोरी सस मा अन्डा।" विकल्पहरू चटनी तयार
घरमा रातो बिरालो: रातो बिरालोहरु संग सम्बन्धित संकेत
वायुघट्टहरू विरुद्ध लडाई। अनुभवहीन नायक
स्याउ संग एक हांस कसरी खाना पकाउनु?
"Teletrade": समीक्षा। "Teletrade": कम्पनी मा कर्मचारीहरु 'अनुभव